Fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny tatavia - Proton any California
Fomba fitsaboana ny Proton ho an'ny fitsaboana amin'ny homamiadana
Miady amin'ny homamiadan'ny voan'ny kansera miaraka amin'ny akorany toa an'i Laser
Ny teknolojia fanaraha-maso vatan-jaza pensilihazo an'i California Protons dia endrika marim-pototra amin'ny fikorontanan'ny taratra amin'ny homamiadana izay ahafahan'ny dokotera mikendry ny fivontosan'ny lalan-dra miady amin'ny ratra avo lenta ao amin'ity faritra saro-pady sy fanamby ity.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika efa zokiolona, ​​ny teknolojia fanodinam-bolo avy amin'ny pensilihazo dia manolotra fitsaboana ara-taratra ho an'ny homamiadan'ny lalan-drà ao anaty 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana tanteraka. Azontsika atao ny mamely ny fivontosana vongan'ny fivontosana amin'ny atody ary manamaivana ny fandefitra manimba amin'ny fahazoana ny taova sy ny taova mahasalama. Zava-dehibe ho an'ny marary homamiadana izany satria ny toerana misy azy ao amin'ny pelvis akaikin'ny rafitra saro-pady, anisan'izany ny taova gastrointestinal sy ny fiterahana. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Tatavia fitsaboana Proton
Carcinoma sela tetezamita (urothelial), izay endrika mahazatra indrindra amin'ny homamiadan'ny lalan-drà ary manomboka any amin'ireo sela mametaka ny atin'ny taova
Carcinoma sela squamous an'ny tatavia izay manomboka amin'ny sela manify fisaka hita ao amin'ny sela izay mitovy amin'ny ambonin'ny hoditra
Arovy ny tsinay, tenda, ny taovam-pananahana ary ny taolan-tonon-taolana
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana, anisan'izany ny havizanana sy manimba ny gastrointestinal sy ny fiterahana taova
Tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana mamily
Ny teknôlôjian'ny fandinihana ny vatan-tsamainty dia mifehy mivantana ny proton mba hametrahana ny tampon-tranon'i Bragg - ny fotoana nametrahany ny angovo faran'izy ireo indrindra - mivantana ao amin'ny fivontosana. Izany dia ahafahantsika mikarakara ireo fivontosana mihanaka be kokoa sy manova ny fatra ao anaty fivontosana.
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera hamaky mora kokoa amin'ny taratra miakatra amin'ny fivontosan'ny valan'aretina homamiadana sy ny hozatra, ary mampihena ny fatra amin'ny sela miaro ny vatana sy ireo taova mihantona. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fampihenana taratra amin'ny tavy mahasalama manodidina ny tatavia dia mety hampihena ny fahasimban'ny taovam-pisefoana sy ny taovam-pananahana, toy ny prostate, uterus, ovaries ary tubes fallopian. Zava-dehibe izany satria ny fahasimbana amin'ireo rafitra mora tohina ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe ary mety hitarika homamiadana faharoa.
Ny teknolojia fanodinam-baravarankely misy fihenam-bolo dia mampihena ny taratra amin'ny tsoka amin'ny taolana, izay mety hampihena ny harerahana mifandraika amin'ny fitsaboana ary manimba ny hery fiarovana.
Dingana sy fitsaboana
Miankina amin'ny sehatra sy ny karazana homamiadan'ny lalan-drà, mety ilaina ny fitambaran'ny fitsaboana hafa, ny fitsaboana simika ary ny taratra amin'ny fivontosan'ny vay. Ny safidin'ny fitsaboana koa dia voakasiky ny taona, ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Vokatry ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny ratra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny valan'aretina any amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mampidi-doza amin'ny fiainana noho ny taratra manimba ny gastrointestinal sy ny fiterahana. Izy io koa dia manome ny mety hisian'ny fihenan-drà mety ho an'ny homamiadana faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy taova mahasalama manodidina anao.
Fandinihana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny voan'ny kansera
Ny fitsaboana protonized optimized risika hampihenana ny homamiadana faharoa
Fitsaboana ny vatan'i Proton ho an'ny homamiadan'ny valan'akoho: ny fandinihana ny fitsaboana mitahiry ny lalan-drà miaraka amin'ny radiotherapy sy ny fitsaboana simika intra-arterial